Ololaha wacyigelinta Coronavirus ee degaanada Puntland oo la xoojinayo
GAROWE, Puntland - Shirka 5-aad ee Guddiga joogtada ah Golaha Wakiillada Dawladda Puntland oo uu shir-Guddoomiyey Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo ay wehliyaan ku xigeenka 1aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman, ku xigeenka 2aad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa warbixinno looga dhageystay Madax-guddiyeedyada.
Warbixinnada laga dhageystay ayaa ku saabsanaa Amniga, Dhaqaalaha, Arrimaha bulshada, Qorsheynta, Deegaanka, Arrimaha gudaha, Kaabayaasha dhaqaalaha iyo kormeero iyo kulamo ku aadanaa xog-isweydaarsi, waxqabadka, qorshayaasha iyo caqabadaha jira ee ay Hay’adaha Dawladu la wadageen Guddiyada , gaar ahaan wax ka qabashada kor u kaca iyo is bedelka ku yimi sarifka shillinka Soomaaliga.
Dhinaca kalena, Guddigu waxay soo-jeediyeen in Guddiga gaarka ah ee goluhu u-xilsaaray Wacyi-gelinta Caabuqa COVID-19 ay dar-dargeliyaan Wacyi-gelinta bulshada iyo booqashada Xarunta caafimaadka, si loo ilaaliyo bed qabadka caafimaadka iyo Fayo-dhawrka shacabka Puntland.
Hogaan loo doortay xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland
Puntland 19.07.2020. 13:10
Coddeynta oo ahayd mid qarsoodi ah waxaa ku tartamay saddex murashax oo ay haweenay ku jirto.
Dib-u-eegista dastuurka Soomaaliya oo lagu baaqay in dib loo dhigo
Puntland 17.03.2020. 18:00